Fahasalamana ho an’ny rehetra Miisa 12 hatreto ireo ekipa efa namaly ny antson’ny ASIEF
Miankina amin’ny fanaovana fanatanjahantena amin’ny ankapobeny ny fahasalaman’ny vatana. Aretina maro mantsy no voasorok’izany toy ny diabeta, ny hatavezana diso tafahoatra…
Hanampiana ny olona hahay hitaiza vatana amin’ny fanatanjahantena dia hotanterahina ny 8 sy ny 9 desambra ho avy izao eto an-drenivohitra ilay « jeux corporatifs » karakarain’ny ASIEF (Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires). Ekipa miisa 12 hatreto no efa namaly ny antson’ny ASIEF, hoy ny filohany Jean Aimé Alias. 32 anefa no tanjona hotratrariny. Lalao ara-panatanjahantena maro no ho hita ao. Anisan’ireny ny baskety, ny volley, ny kitra ho an’olona fito, ny tsipy kanetibe, ny tennis…izay azon’ny rehetra handraisana anjara. Miantso ireo mpanohana sy mpiara-miasa aminy rehetra ny ASIEF hifanome tanana amin’izy ireo. Ny hananan’ny olona fahasalamana tomady hahafahana miatrika ny fiainana amin’ny andavanandro no tanjon’izy ireo, indrindra fa ireo mpiasam-panjakana. Aorian’Antananarivo dia hoentina avy hatrany hihazo ny faritra ny hetsika.